Rexulti - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Rexulti
Generic Name: Rexulti Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Rexulti ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Rexulti® သည် စိတ်ရောဂါကုဆေးဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်အတွင်းမှ ဓါတ်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
Rexulti®ကိုschizophreniaစိတ်ရောဂါ၏ လက္ခဏာများကိုကုသရာတွင် အသုံးပြုကြ၏။
Rexulti®ကိုတခြားဆေးများနှင့်တွဲပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဖြစ်တတ်သည့် မေဂျာစိတ်ကျခြင်းကမောက်ကမရောဂါတွင် သုံးကြ၏။
Rexulti®ကို ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသုံးစွဲပါ။ အညွှန်းစာတွင်ပါသမျှကိုလိုက်နာပါ။ ဆရာဝန်က ရံဖန်ရံခါဆိုသလိုဆေးပမာဏကိုပြောင်းလဲနိုင်၏။ သတ်မှတ်ထားသောပမာဏထက် ပိုသောက်ခြင်း၊ လျော့သောက်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ကာလကပိုသောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
ရေများများသောက်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ပူသောအချိန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်များတွင် ပိုသောက်ပေးပါ။ Rexulti®သောက်နေရလျှင် ရေဓါတ်အလွယ်တကူခမ်းခြောက်နိုင်ပါသည်။
Rexulti®သည် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်မြင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ဆီးချိုရှိပါကဆေးသုံးနေစဉ် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးရပါမည်။
Rexulti® (brexpiprazole)ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Rexulti® (brexpiprazole)ကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Rexulti® (brexpiprazole)ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Rexulti® (brexpiprazole)အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Rexulti အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Rexulti®တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
Rexulti®ကို Dementia နှင့်ဆိုင်သောစိတ်ရောဂါအခြေအနေများတွင် ခွင့်ပြုမထားပါ။ Dementia နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများရှိသည့် အသက်ကြီးသူများတွင် Rexulti®ကြောင့် သေနိုင်ချေ ပိုများ၏။
Rexulti®ကိုစိတ်ချစွာသုံးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါတို့ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ သွေးပေါင်ကျ
တက်ဖူးခြင်း၊ ခေါင်းထိဖူးခြင်း၊ ဦးနှောက်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း
ကိုယ်တိုင် သို့ မိသားစုအတွင် ဆီးချို၊ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်တက်ခြင်းများရှိခြင်း
စိတ်ကျရောဂါကုဆေးများကိုပထမဆုံးစသောက်ရပါကလူငယ်များတွင် သတ်သေလိုစိတ်များပေါ်လာတတ်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်မှန်မှန်ပြပြီးသင့်တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးရမည်။ သင့်မိသားစုနှင့် သင့်ကိုပြုစုပေးသူများကိုလည်းစိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းများကိုသတိပေးထားရမည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Rexulti ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Rexulti ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Rexulti® နှင့်ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများ – အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းတို့ ဖောင်းကြွခြင်းများ ဖြစ်လာပါကအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူရမည်။
Rexulti®ကိုပမာဏအများကြီးသုံးခြင်း၊ ရေရှည်သုံးခြင်းများကုမရနိုင်သည့် ရွေးလျားမှုဆိုင်ရာကမောက်ကမရောဂါများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါရောဂါ၏လက္ခဏာများတွင် နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ မျက်လုံး၊ မျက်နှာ၊ လက်မောင်း၊ ခြေထောက်တို့မှ ကြွက်သားများထိန်းမရအောင်လှုပ်နေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ Rexulti®ကို ကြာကြာသုံးနေလေလေအဆိုပါကမောက်ကမရောဂါဖြစ်လာနိုင်ချေ များလေလေပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်နိုင်ချေသည် အမျိုးသမီးများနှင့် အသက်ကြီးသူများတွင် ပိုများ၏။
စိတ်အခြေအနေနှင့် အပြုအမူများပြောင်းလာခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အိပ်မရခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်လွယ်ခြင်း၊ ရန်ပြုလိုခြင်း၊ ဂဏာမငြိမ်ခြင်း၊ တက်ကြွလွန်ခြင်း (စိတ်ရောရုပ်ပါ)၊ စိတ်ပိုကျလာခြင်း၊ သတ်သေလိုစိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ချင်ခြင်းများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့်ပြန်ပြပါ။
အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြရမည်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိတ်သောကဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ဂဏာမငြိမ်ခြင်းများခံစားရလျှင်
သတ်သေလိုစိတ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်နာအောင် လုပ်လိုစိတ်များဖြစ်ခြင်း
သွေးတွင်သကြားဓါတ်တက်ခြင်း – ရေဆာခြင်း၊ ဆီးခဏခဏသွားခြင်း၊ ဗိုက်ဆာခြင်း၊ အာခြောက်ခြင်း၊ ခံတွင်းမှ သစ်သီးနံထွက်ခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ အရေပြားခြောက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း
သွေးဆဲလ်အရေအတွက်နည်းခြင်း – ရုတ်တရတ် အားနည်းသလို၊ ဖျားသလိုခံစားရခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ ပါးစပ်အနာများပေါက်ခြင်း၊ သွားဖုံးများနီခြင်း ကြွခြင်း၊ အရေပြားအနာများ၊ အအေးမိတုပ်ကွေးကဲ့သို့လက္ခဏာများ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း
ပြင်းထတ်သောအာရုံကြောတုံ့ပြန်ခြင်း – ကြွက်သားများတောင့်ခြင်း၊ အပြင်းဖျားခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ နှလုံးခုန် မြန်ခြင်း၊ မညီခြင်း၊ ခြေလက်တုန်ခြင်း၊ မေ့လဲတော့မလိုခံစားရခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Rexulti နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Rexulti® (brexpiprazole)သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အသည်းစီပိုး၊ HIV ပိုးရောဂါများအတွက် ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Rexulti နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Rexulti® (brexpiprazole) က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Rexulti နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Rexulti® (brexpiprazole)သည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Rexulti ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Depressive Disorderအတွက် တွဲဖက်အဖြစ်
တွဲဖက်ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသောအစပြုပမာဏမှာis 0.5 mg or 1 mgတစ်ရက် တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ အစာရှိရှိမရှိရှိသောက်နိုင်၏။
1 mgတစ်ရက်တစ်ကြိမ်ထိရအောင် ဆေးကိုချိန်ဆတိုးပေးသွားပြီး2mgအထိရောက်အောင် လုပ်ရပါမည်။ ပမာဏတိုးခြင်းအားလူနာ၏တုံ့ပြန်မှု၊ ဒဏ်ခံနိုင်မှုပေါ်မူတည်ကာတစ်ပတ်စီခြားပြီး ပြုလုပ်သင့်သည်။ အများဆုံးနေ့စဉ်သုံးပမာဏမှာ3mg ဖြစ်သည်။ ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် ဆေးဆက်ပေးရန်လိုမလို၊ ကုသမှုအတွက်သင့်လျော်သောပမာဏဟုတ်မဟုတ်ကိုတွက်ချက်နေရပါမည်။
ပထမ ၁ ရက်မှ ၄ ရက်အထိသတ်မှတ်ထားသောRexulti®ပမာဏမှာတစ်ရက်လျှင် 1 mgတစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ အစာရှိရှိမရှိရှိသောက်နိုင်ပါသည်။
တားဂတ်ထားရမည့် Rexulti®ပမာဏမှာတစ်ရက်လျှင် 2-4 mg တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ၅-၇ရက်မြောက်အထိ2mg အထိတိုးပေးပြီးနောက် ၈ ရက်မြောက်နေ့တွင် လူနာ၏တုံ့ပြန်မှု၊ ဒဏ်ခံနိုင်မှုပေါ်မူတည်ကာ4mg အထိတိုးပေးရမည်။ အများဆုံးသတ်မှတ်ပမာဏမှာ4mg ဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Rexulti ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Rexulti® (brexpiprazole)ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးပြား: brexpiprazole 0.25mg
Rexulti® (brexpiprazole)ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။